Filtrer les éléments par date : samedi, 05 août 2017
samedi, 05 août 2017 22:12
Mahajanga: Nirotsaka nanadio tanàna ny Sampana Tanora Kristiana FJKM
Mpizaika STK maherin'ny 500 no nirotsaka nanatevin-daharana ny hetsika fanadiovana tanàna fanao eto Mahajanga isaky ny zoma maraina. Fanaon'ireo mpiasa ao amin'ny Kaominina renivohitr'i Mahajanga, sy ireo mponina tsara sitrapo isaky ny zoma maraina ny mitety Fokontany hanaovana fanadiovana faobe.
Tamin'ny zoma teo, anjaran'ny Fokontany Mahavoky no nanaovana fanadiovana ary nahazo tombony ity Fokontany ity noho ireo mpanadio marobe.
Mifamontaona amina toerana iray rehefa zoma ny andro ary ny Ben'ny tanàna, Andriatomanga Mokthar Salim sy ireo lehiben'ny sampan-draharaha rehetra mihitsy no mitarika ny hetsika miaraka amin'ny kifafa mba hitaizana ny mponina sy ireo vahiny mandalo mitsidika an'i Mahajanga.
samedi, 05 août 2017 22:06
Tsiandopy Jacky: Voasambotry ny Polisy teto Nosy-Be ilay ahiahiana ho namono azy
Tra-tehaky ny Polisy tao amin’ny Kinjan’Ambodivoanio, teo ampijerena festival Sômarôho, androany sabotsy 05 aogositra tokony ho tamin’ny 2ora sy sasany maraina i Francesco, ahiahiana voalohany ho tompon’antoka tamin’ny famonoana mivantana ny minisitry ny Asam-panjakana teo aloha sady filohan’ny Sendikan’ny Inspeteur d’Etat de Madagascar, Tsiandopy Jacky.
Tovolahy vao herotrerony, 20 taona, ary fianakaviana akaiky ny tompokolahy i Francesco. Mbola ao anaty famotorana tanteraka mahakasika ity raharaha ity ny polisim-pirenena eto an-toerana amin'izao fotoana izao araka ny fanazavan’ny lehiben’ny Polisy eto Nosy-Be Hell-Ville, Kaomisera Rabearivony Joël.
Nisary adala ary naneho fihetsika hafahafa ity tovolahy ity taorian’ny fisamborana azy androany maraina, fa dia nosorany maloto ny vatany manontolo, hatrany an-tampon-doha.
samedi, 05 août 2017 21:32
Campus Ambondrona Mahajanga: Nametraka Tsangambato ho fahatsiarovana an'i Nelson Mandela
Taty Mahajanga no namaranana ny fanamarihana ny Andro iraisam-pirenena ho an'i Nelson Mandela na ny "Mandela Day" tamin'ity taona 2017 ity.
Androany sabotsy 5 aogositra 2017 no nanaovana ny hetsika fankalazana tao amin'ny Grand Amphi Ambondrona niarahana tamin'ireo mpianatra rehetra, ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra izay notarihin'ny filohan'ny oniversiten'i Mahajanga Rakotoarivony Andrianony Emanuel.
Tonga nanome voninahitra ny "Mandela Day" ihany koa ny Masoivohon'i Afrika tsimo miasa sy monina eto Madagasikara. Taorian'ny kabary nifandimbiasana, nisy ny fampahafantarana an'i Nelson Mandela.
samedi, 05 août 2017 21:06
Festival "Samby jao" : Bientôt à Antsohihy
La première édition du festival "Samby jao" se déroulera à Antsohihy, capitale de la région Sofia les 10, 11, 12 et 13 août prochain. " Samby jao" se veut un rendez-vous des jeunes et offrira des opportunités pour le développement de la jeunesse de la région, cette première édition coïncide d'ailleurs à la Journée mondiale de la jeunesse, célébrée chaque année le 12 août, ont fait savoir Dr Marolasy Danot et Rasolofo Elson lors d'un point de presse à Antsohihy ce samedi.
samedi, 05 août 2017 20:52
Meurtre de Tsiandopy Jacky: Le présumé assassin arrêté à Nosy-Be
Francesco Solomanjary, le présumé assassin de l’ancien ministre de la Fonction publique et président du Syndicat des Inspecteur d’Etat de Madagascar Tsiandopy Jacky, est arrêté par la Police de Nosy-Be ce samedi 05 août 2017 vers 2h30 du matin, en train de se défouler et s’amuser au festival Sômarôho dans le stade d’Ambodivoanio.
samedi, 05 août 2017 08:55
Akademia miaramila Antsirabe: Namoaka Manamboninahitra 78 isa
Manamboninahitra niisa 78 no navoakan’ny Akademia Miaramila Antsirabe ny Zoma 04 aogositra 2017 teo. Andiany roa ireto mpianatra navoaka ireto dia ny andiny mivantana faha 38 nisalotra ny anarana “Fanjiry”, niisa 67 mianadahy ary ny andiany manokana faha 23, niisa 11 nisalotra ny anarana “Lafatra”.
Ny Kolonely Ramasy Razafindratovo Heritiana no nitarika ny lanonana rehetra. Nandritra ity lanonana ara-miaramila ity moa no nitsofan-drano ireo andiany mivantana faha 40 nitondra ny anaran’ny Jeneraly Andrianaivo Raymond sy ny andiany iraisam-piadiana faha 20 mitondra ny anarana “Fivoy”.
Toy ny mahazatra dia nisy ny famindrana ny sabatra sy ny fanevan’ny sekoly tamin’ny andiany zandriny, ho mariky ny fitandroana ny hajan’ny sekoly hoan’ireo andiny zandriny ireo.